Apple dia namoaka fanitarana Shazam ho an'ny Chrome sy Microsoft Edge | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka ny fanitarana Shazam ho an'ny Chrome sy Microsoft Edge
Hatramin'ny nividianan'i Apple an'i Shazam tamin'ny taona 2018, ny orinasa Cupertino dia nampihatra sy nanatsara ny serivisy natolotr'ity orinasa anglisy ity, nanampy fiasa vaovao ary koa ny fampidirana ny asany amin'ny alàlan'i Siri, ka tsy mila mametraka izany amin'ny fitaovana iOS hamantatra hira.
Shazam dia manana fampiharana macOS izay mamela antsika hamantatra izay hira izay mandeha amin'ny Mac, na izany aza, ny fampiharana Tsy nohavaozina efa ho roa taona izao. Raha tsy tianao ny fomba fiasan'ity fampiharana ity dia tokony hanandrana ny fanitarana vaovao ho an'ny Chrome sy Microsoft Edge ianao.
Misaotra fanitarana ityAmin'ny alalan'ny izay navigateur mifototra amin'ny Chromium, dia afaka mamantatra izay hira izay mandeha amin'ny tabilao izay nosokafanay, na YouTube, Netflix, Soundcloud na sehatra hafa.
Raha vantany vao nametraka ny fanitarana izahay, mba hanombohana azy dia tsy maintsy manao izany izahay tsindrio ny kisary manga miaraka amin'ny logo Shazam. Raha vao fantatrao ny hira izay milalao, dia hiseho ny varavarankely pop-up miaraka amin'ny anaran'ny mpanakanto izay ahitana ny rakikira.
ny rohy mankany amin'ny Apple Music hihaino ny hira, hidirana ny tonon'ireo hira, horonan-tsary ... Fanampin'izany, toy ny fampiharana amin'ny fitaovana finday, dia ahafahantsika miditra amin'ny tantara feno ny hira rehetra izay fantatsika tamin'ny alàlan'ny fanitarana.
Indrisy anefa fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy safidy azo atao midira ary afaka miditra amin'ny lisitry ny hira izay efa fantatray teo aloha tao amin'ny dikan-iOS sy amin'ny fitaovana hafa mifandray amin'ny ID mitovy.
Misy mpampiasa milaza fa ny fampiharana tsy mandeha tsara amin'ny fitaovana sasanyNoho izany dia azo inoana fa afaka andro vitsivitsy dia hamoaka fanavaozana vaovao ny orinasa miorina ao Cupertino mba hamahana ireo olana momba ny fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia namoaka ny fanitarana Shazam ho an'ny Chrome sy Microsoft Edge
Foxconn dia manokatra indray ny orinasany any India taorian'ny "sazy" nataon'i Apple
Ny Beats Fit Pro dia halefa any Eropa sy Kanada amin'ny 24 Janoary